Kamio rallye 2022 an'ny Honda Passport hifaninana amin'ny andiany American Rally Association
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Kamio rallye 2022 an'ny Honda Passport hifaninana amin'ny andiany American Rally Association
Ekipa injeniera Honda no mandray ny hazakazaka rallye Honda Passport vaovao. Nasehon'i Honda ny kamiao rallye 2022 Passport izay namboarina manokana ho an'ny fifaninanana nataon'ny ekipan'ny Honda Performance Development (HPD) Maxxis Rally hazakazaka, nanasongadina ny fahaiza-manaony sy ny faharetana efa ela no namboarina ho an'ny kamiao maivana Honda.
Mampiseho ny endrika vaovao manjavozavo an'ny Passport 2022, ny kamiao rallye dia nanao ny hazakazaka voalohany nataony tao amin'ny Lake Superior Performance Rally (LSPR) any Michigan ny 15 sy 16 Oktobra. hetsika mandritra ny vanim-potoana 2022 ao amin'ny kilasy 4WD Limited.
Ohatra iray manan-danja amin'ny Honda "Racing Spirit", ny ekipan'ny hazakazaka HPD Maxxis Rally dia ahitana mpiara-miasa Honda monina ao amin'ny Foiben'ny Fampandrosoana Auto any Ohio. Ny ekipa dia sampana iray amin'ny Honda of America Racing Team (HART) lehibe kokoa, izay ahitana mpiara-miasa amin'ny trano fampandrosoana sy famokarana manerana an'i Amerika Avaratra.
Miaraka amin'ireo fiara an-dalambe novaina mahatratra haingana mihoatra ny 100 mph amin'ny lalana mihidy voajanahary izay misy vatokely, loto, fotaka ary ranomandry amin'ny lalana mirefy an-jatony kilaometatra, ny andiany ARA National and Regional Championship dia mifaninana mafy. Tamin'ny hazakazaka LSPR, ny kamiao rallye Honda Passport dia notarihin'ny injeniera Honda Chris Sladek, injeniera fitsapana fampiatoana miorina ao amin'ny Foibem-pampandrosoana fiara any Amerika Avaratra any Ohio, ary notarihan'i Gabriel Nieves, injeniera mpanamboatra chassis miorina ao amin'ny orinasa. fitaovana mitovy.
Ho an'ny traction ambony indrindra sy ny fampisehoana, ny kamiao rallye Passport dia misy kodiaran'ny BRAID Winrace T (7.5″x17″) nofonosina amin'ny kodiarana RAZR M/T na RAZR A/T (265/70-R17) voaporofon'ny Maxxis. , arakaraka ny fepetran'ny hetsika. 1/8 ″-mirefy vita amin'ny vy vita amin'ny menaka aluminium matevina ary ny takelaka misy tsipika fanavahana aoriana dia miaro ny ambanin'ny vatany, ary koa ny takelaka polyethylene avo lenta manarona ny fitoeran-tsolika sy ny singa hafa. Carbotech XP12 frein pads sy ny hazakazaka hazakazaka amin'ny mari-pana ambony ranon-javatra freins manome tsy tapaka freins amin'ny mitaky ny tontolo rallye.
Mampalahelo fa ny famokaran'ny Passport 3.5-litatra i-VTEC® V6, fifindran'ny mandeha ho azy 9-hafainganam-pandeha miaraka amin'ny mpivezivezy paddle, rafi-pitantanana Variable Torque Management (i-VTM4™) marani-tsaina, ary ny singa fampiatoana rehetra dia avela tsy ovaina ho an'ny fifaninanana; Ny hany fanampiny dia ny fantson-drano mandeha ho azy avy amin'ny fonosan'ny pasipaoro misy ny pasipaoro. Ny mpamily dia mampiasa ny Sequential mode sy ny paddle shifters ho an'ny fanaraha-maso bebe kokoa, ary ny Sand Mode an'ny Passport's Intelligent Traction Management rafitra dia ampiasaina amin'ny fitsinjarana torque tsara indrindra sy ny fampisehoana amin'ny faritra malalaka.
"Ny zava-misy fa tsy nila nanova ny fiaran'ny Honda Passport 2022 izahay na ny fampiatoana ho an'ny terrain manasazy sy ny fifaninanana dia miresaka betsaka momba ny fahaiza-manao sy ny fampisehoana izay manara-penitra ao amin'ny pasipaoro," hoy i Chris Sladek, injeniera Honda ary mpihazakazaka rally. .
Ho fiarovana fanampiny, ny atitany amin'ny kamiao rallye Passport dia misy seza OMP hazakazaka miaraka amin'ny harnesses enina amin'ny fifaninanana, tranom-bilona fiarovana, rafitra famonoana afo, solosaina famoriam-bahoaka ary rafitra fifandraisana anaty fiara. Mba hampihenana ny lanja dia nesorina ny seza aoriana, ny karipetra, ny insulation feo, ary ny zavatra hafa haingon-trano anatiny, ary nosoloina polycarbonate Lexan ny sisiny sy ny fitaratra fitaratra aoriana. Mampitombo ny fahaiza-mivezivezy amin'ny zorony mafy ny tahony hydraulika, fa ny setroka novaina kosa dia mamoaka feo aingam-panahy. Noforonin'ny HPD, ny sary fonosin'ny pasipaoro ivelany dia manasongadina ny fahaiza-manaon'ny Honda Passport.
"Vonona ny hazakazaka miaraka amin'ny Passport Honda 2022 mikitoantoana izahay," hoy i Gabriel Nieves, injeniera sy mpiara-miombon'antoka Honda. “Ho vanim-potoana lehibe izany.”
Tamin'ny 2021 Lake Superior Performance Rally tamin'ny 15 sy 16 Oktobra, nifaninana tamin'ny andiany ARA East Regional ny ekipa. Ny andro voalohany amin'ny fifaninanana dia misy dingana haingana miaraka amin'ny fiolahana mikoriana ary mihazakazaka hatramin'ny alina, izay tena zava-dehibe amin'ny fitazonana ny hafainganam-pandehan'ny fifaninanana manerana ny ala ny jiro fanampiny ho an'ny Passport. Ny ekipa dia nihazakazaka tsy tapaka teo amin'ireo 10 voalohany tamin'ireo mpifaninana rezionaly 42, saingy ny fanalana pneu teo amin'ny dingana faha-3 no nanakana ny ekipany, ka nahatonga azy ireo nahavita mihoatra ny 9 minitra taty aoriana noho ny nandrasana tamin'ny sehatra.
Ny dingana ara-teknika, henjana ary mando kokoa dia nomanina ho an'ny andro faharoa, miaraka amin'ny pasipaoro miasa tsara amin'ny kodiarana Maxxis RAZR M/T. Ny ekipa dia namoaka fotoana tsy tapaka tamin'ireo mpifaninana isam-paritra 15 ambony.
Nahavita 22 ny ekipand amin’ireo mpifaninana isam-paritra 42, toerana 4th amin'ny mpifaninana 6 ao amin'ny kilasy Limited 4WD.
LSPR 2021 no hetsika famoriam-bahoaka dingana fahatelo izay nifaninanan'ny ekipa tamin'ny Passport Honda. Nandritra ny hetsika voalohany nataony — ny 2019 Southern Ohio Forest Rally (SOFR), ao anatin'ny andiany ARA East Regional — dia nametraka 2 ny ekipa.nd ao amin'ny kilasy 4WD voafetra ary 12th amin'ny ankapobeny amin'ireo mpifaninana 75.